Hritusharma Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Hritusharma
Hritusharma ndeye freelancer blogger, anoshanda mukugadzira tech uye dhizaini mapurogiramu. Iye anoda chaizvo kubatsira munhu wese kuti ave mugadziri sepro pro. Kunze kwekuve tech junkie, Hritusharma anoda vhidhiyo kugadzira uye kutora mifananidzo.
Nongedzo Kune Iwo Mhando uye Maturu Ekutanga Kugadzira Pamhepo Vhidhiyo Makosi
Svondo, Kubvumbi 11, 2021 China, December 30, 2021 Hritusharma
Kana iwe uchida kugadzira yepamhepo dzidziso kana yevhidhiyo kosi uye uchida inowoneka runyorwa rweese akanakisa maturusi uye marongero, ipapo iwe uchada uyu wekupedzisira gwara. Kwemwedzi yakati wandei yapfuura, ini ndakazviongorora uye kuyedza maturusi mazhinji, Hardware uye matipi ekugadzira dzidzo dzakabudirira uye makosi evhidhiyo ekutengesa paInternet. Uye ikozvino unogona kusefa iyi runyorwa kuti uwane nekukurumidza izvo zvaunoda zvakanyanya (pane chimwe chinhu